Ny vaksinina Rosiana COVID mora vidy dia manitatra any Alzeria, Arzantina, Bolivia, Serbia
Home » etn » Ny vaksinina Rosiana COVID mora vidy dia manitatra any Alzeria, Arzantina, Bolivia, Serbia
Ny vola vidiny dia $ 10.00, ny tahan'ny fahombiazan'ny 90%, ary ialana tanteraka amin'ny tranga COVID-19. Ity vaksinina ity dia nahazo alalana tany Algeria, ary tany aloha tany Arzantina, Bolivia ary Serbia.
Mora sy mahomby, ity no mari-pamantarana Sputnik V ho vaksinin'ny coronavirus. Natolotry ny masoivohom-pirenena momba ny vokatra ara-panafody ao amin'ny Repoblika Demokratika Entim-bahoakan'i Alzeria.
Ny vaksinina Rosiana Sputnik V miady amin'ny Coronavirus dia voasoratra ao anatin'ny fomba fahazoan-dàlana hampiasa vonjy maika any Algeria.
I Algeria no firenena afrikanina voalohany mampiasa vaksinina rosiana hiarovana ny olom-pireneny manoloana ny COVID-19.
Sputnik V dia voasoratra tamin'io fomba io ihany tany aloha tany Argentina, Bolivia ary Serbia.
Ny famatsiana ny vaksininy any Algeria dia hohafanain'ireo mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena ao amin'ny RDIF any India, Sina, Korea Atsimo ary firenena hafa.
Kirill Dmitriev, Tale Jeneralin'ny Rosiana Fampindram-bola mivantana, nanao hoe:
“Miarahaba ny fisoratana anarana voalohany amin'ny vaksinin'ny Sputnik V aty Afrika ny RDIF. Ny fanomezana ny vaksininy any Algeria dia hanampy amin'ny fiarovana ny mponina ary hanohana ny famerenana amin'ny laoniny ny asa ara-toekarena ”.
Sputnik V dia voasoratra anarana noho ny tombony lehibe maromaro:
Ny fahombiazan'ny Sputnik V dia mihoatra ny 90%, miaraka amin'ny fiarovana feno amin'ny tranga henjana amin'ny COVID-19.
Ny vaksinin'ny Sputnik V dia miorina amin'ny sehatra voaporofo sy voadinika tsara momba ny vatan'ny adenoviral olombelona, ​​izay mahatonga ny sery ary efa an'arivony taona maro izay.
Sputnik V dia mampiasa volo roa samy hafa ho an'ny tifitra roa mandritra ny fanaovana vaksiny, manome hery maharitra maharitra kokoa noho ny vaksiny amin'ny alàlan'ny fomba fitaterana mitovy ho an'ny tifitra roa.
Ny fiarovana, ny fahombiazana ary ny tsy fisian'ny voka-dratsin'ny vaksin adenoviral dia voaporofo tamin'ny fikarohana klinika maherin'ny 250 nandritra ny roapolo taona.
Olona maherin'ny 1.5mn no efa vita vaksinin'ny Sputnik V.
Ireo mpamorona ny vaksinin'ny Sputnik V dia miara-miasa miaraka amin'i AstraZeneca amin'ny fizaham-pitsaboana iraisana mba hanatsarana ny fahombiazan'ny vaksinin'ny AstraZeneca.
Ny vaksinin'ny Sputnik V dia nankatoavina tany Russia, Belarus, Serbia, Argentina, Bolivia, ny dingana hanekena ny vaksinin'ny EU dia natomboka.
Tsy misy allergy mahery vokatry ny Sputnik V.
Ny mari-pana fitehirizam-bokin'ny Sputnik V amin'ny + 2 + 8 C dia midika fa azo tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana mahazatra fa tsy mila mampiasa vola amin'ny fotodrafitrasa fanampiny mangatsiaka fanampiny.
Ny vidin'ny Sputnik V dia latsaky ny $ 10 isaky ny tifitra, mahatonga azy io ho mora erak'izao tontolo izao.
Ny Tahirim-bola Rosiana Fampiasam-bola mivantana (RDIF, tahirim-bolam-panjakana mpanankarena ao Russia) dia ao aorinan'i Sputnik.